July 2019 - Tha Dinn Oo
သူမကို တန်ဖိုးထားေ ပး တဲ့ မော င့်ကြောင့် သူမ တန်ဖိုးရှိအောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်
Posted by hanminhtet — July 31, 2019 in Celebrity
ဘဏ် ကို ငွေ အပ်ပြီး အတိုး နဲ့ ထိုင် စားမယ် စိတ်ကူးထားသလား?
Posted by hanminhtet — July 31, 2019 in Knowledge
ချင်းပြည်နယ်က တောင်သူဦးကြီးတွေ စိုက်ပျိုးစားသုံးဖို့ ဒန့်ဒလွန်မျိုးစိတ် (၇၀၀) ခန့် လှူဒါန်းခဲ့ပြန်တဲ့ ဝေဠုကျော်
ရှေးဟောင်းပုဂံအတွက် မြန်မာမိန်းကလေးအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ဝတ်မှုံရွှေရည်ဟာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ ပုဂံအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သူမဟာ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာကိုလည်း ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး
Posted by hanminhtet — July 31, 2019 in Celebrities
ကဲ မန်းလေးက သွားဆျာဝန်လေးတဲ့ အကောင့်ထဲက သွားနာတဲ့ Bff တွေကို မန်းရှင်း
ဟန်ထူးဈာန်နဲ့အတူ ဘုရားတွေလိုက်ဖူးနေတဲ့ ထိုင်းအလှမယ် ဆွန်ဆွန်
မြန်မာပြည်ကပရိသတ်တွေက ချစ်သလို မြန်မာပြည်ကိုလဲ ချစ်တဲ့ ထိုင်းအလှမယ် ဆွန်ဆွန်ဟာ ယနေ့မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘုရားတွေ လိုက်လံဖူးမျှော်နေပါတယ်။ သူဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားကို မြန်မာပြည်ရောက် တိုင်းလာရောက်ဖူး မျှော်လေ့ရှိပြီး သူက ဗိုလ်တစ်ထောင် ဘိုဘိုးကြီးဆီမှာ အမြဲ ဆုတောင်းတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။ သူက ဘိုးဘိုးကြီး ကို မြန်မာပြည်ကို အမြဲလာရပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းတာကြောင့် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့တာဟာ ၂ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သံရုံးကို သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှုဖြင့် တရားစွဲမည်
Posted by hanminhtet — July 31, 2019 in Uncategorized
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံး၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပုံပါ ပန်းချီကားနှင့် ပတ်သတ်၍ ပန်းချီဆရာနှင့် အမေရိကန်သံရုံးကို သာသနာ ညှိုးနွမ်းစေမှုဖြင့် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
လူငယ်ဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းလန်းနေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်တွေ
အနုပညာမှာ ပါရမီပါပြီး၊ အကောင်းဆုံးဖန်တီးတတ်တဲ့ ချစ်စရာမင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ ဝါရင့်မင်းသမီးတစ်ဦးတောင်
့ ချောင်းသာမှာ ပင်လယ်စာ လိုက်ရောင်းနေရတဲ့ သင်းသင်
အလှမယ်သင်းသင်းဟာဆိုရင် ဝေဠုကျော်နဲ့အရှုပ်အရှင်းတွေဖြစ်ရာကနေစပြီး နာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အားပေးထောက်ခံသူတွေနဲ့ သင်းသင်းအတွက်ရပ်တည်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိလာခဲ့တာပါ။ သင်းသင်းကအခုဆိုရင်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သင်းသင်းကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
မွေးနေ့ မှာ စုထားတဲ့အနုပညာကြေး သိန်း ( ၁၀၀ ) ကို အဖေအမေကိုကတော့လိုက် တဲ့ နေဆန်း
နေဆန်းကတော့ မွန်တိုင်းရင်းသားလေး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေ လူသိများလာတာပဲဖြစ်ပြီး ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေအပြင် ပညာပေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းတင် ဆက်ပေးလေ့ရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ပရိသတ်တွေက အချိန်နဲ့တပြေးညီ စောင့်ကြည့်အားပေးရတဲ့အထိ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပျတဲ့နရောတှကေို လှူခှငျ့ရနတောကိုတောငျ ပြျောရှငျနတေဲ့ ပိုပို
“ရှုတငျနားပွီးထဲက အပူရှပျပွီး နမေကောငျးဖွဈနတော အခုထိ မကောငျးလာသေးဘူး ဆိုတဲ့ သကျမှနျမွငျ့”
“ဗိုငျးရပျဈရနျအပွငျ သူခိုးရနျ၊ ဓားပွရနျကိုပါ သတိထားကွဖို့ သတိပေးလိုကျတဲ့ တငျဇာမျော”
၄၈ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်တဲ့Ivermectin လို့ခေါ်တဲ့ဆေး
” အဲ့ဒီည ” မြောက်ဥက္ကလာမြို့ကြီး အသံမထွက်ဘဲ ကြိတ်ငိုတဲ့ အထိ
Copyright © 2020 Tha Dinn Oo. All rights reserved.